5/6/2006: Submitted for publication via web
05-JUNE-1988 - JABINTII JEELKA MADHEERRA
Waxay ahayd barqadii lixiyo labaatankii may ( 26- 5- 88 ) oo ahayd maalin khamiis ah, markii aanu maqallay siidhiga askarta jeelka oo makhsin walba ka dhex qaylinaaya iyo waliba askarta oo maxaabiista ugu baaqaya in laysugu yimaado bannaanka weyn ee jeelka dhexdiisa ah.
Haddii mid guri ku jiray, mid musqusha ku jiray iyo mid xamaamka maydhashada ku jirayba ay isugu yimaadeen barxaddaa weyn askartuna ay aad u dhoobantahay dhinacyada maxaabiista, ayaa waxa ka soo galay albaabka u dhaxeeya qaybta maxaabiista iyo xafiisyada askarta, sarkaal labisan dirayskiisii ciidannimo oo ay ku lamaantahay darajadiisiina. Muu ahayn nin aanu hore u aragnay, waxaase jirtay in maalintaa laba, sadex casho ka hore uu geeryooday taliyihii xabsiga dhexe ee madheera Daahir jubonayn oo xanuun kadis ahi ku soo booday, waxaana kollayba la sugayey in taliye cusub loo soo magacaabi doono jeelka weyn ee madheera.
Waxa uu noo sheegay inuu yahay taliyihii xabsiga dhexe ee Hargaysa (waa ninkii Xasan Jilic) badalaye iyo geerida ku timid taliyixii xabsiga Madheera iyo waliba in isaga lagu soo amray inuu sii tago Madheera inta cid loo soo magacaabayo. Qudbad isagu jirta wax sheeg iyo amar farid kadibna wuxuu noo sheegay inaanu hawlahayaga qabsanno.
Haddii intaani dhacday, waxaa la baadi doonay bal in la helo cid soo martay jeelka Hargaysa oo warbixin maxaabiista ka siisa dabeecadda iyo dhaqanka ninkaasi leeyahay, durbadiibana waxaa la helay lana sheegay inuu yahay in aan xilkas ahayn kuna soo meeraysta xataa raashinka iyo lacagta yar ee dadka maxaabiista ah qaraabadoodu ay u keenaan, waxaana habeenkaa la kala seexday iyadoo laga dharagsanyahay ninkaasi iyo dabcigiisa.
Subaxnimadii hore ee maalintaa ku xigtay oo ahayd maalin Jimce ah bisha Mayna ay ahayd todoba iyo labaatan ( 27- 5- 1988 ) saacaduna ay ahayd abaaro todobadii subaxnimo, ayaa waxaa jeelka soo galay koox saraakiil milatariga ah oo uu horkacayey taliyihii dugsiga milatariga ee madheera Cabaas kuwaasoo fuulay qolka rakaalka, inyar ka dibna waxaad arkaysay askartii jeelka oo la soo wada baxay kuna gaadhan hubkoodii iyo qalabkoodii dagaalka.
Maalinta Jimcuhu waxay ahayd maalinta dadka maxaabiista ah ay soo booqdaan qaraabadoodu, waxaana salaadii horeba loo sii diyaargaroobay soo dhaweyntii dadka, iyadoo maalintaasi tahay maalin ay maxaabiistu helaan wararka todobaadkaa la soo dhaafay. Waxaa loo yeedhay maxaabiistii u horraysay ee loo yimid (sida caadadu tahay maalintaa maxaabiista badankoodu waxay tubnaan jireen albaabka maxaabiista looga yeedho iyo agagaarkiisa) markii ay soo noqdeena waxaa la weydiiyey sidii caadadda ahayd cidda u timi iyo war wixii ku soo kordhay.
Waxay maxaabiistii sheegeen inaan habayaraatee cidna la tusin ee lagu yidhi oo kali ah raashinkan ayaa laydiin keenee qaata. Waa wixii lagu sheegayey iyo tolow ma wuxuu ina moodayaa "Abu jeerin " miyaanu ogayn in ragga meesha ku jiraa yihii xabsi daa' in ayaa markiiba laysla dhex qaaday, iyadoo aad arkaysay raggii siyaasadda u xidhnaa oo afar - afar iyo sadex - sadex geedaha hoostooda isagu imanaya kuna faqaya. Yaanu jirin nin qudha oo raashinka soo qaataa, haddaan layna tusayn dadkeena aynuu ahaa waxa kali ah ee maxaabiistaa siyaasadda u xidhani ay is faraysay, waxaana markiiba saraakiishii jeelka la gaaadhsiiyey in uu jiro kacdoon ka dhan ah raashinka khaliga ah ee aanay cidina sidin ee maxaabiista loogu yeedhayaa.
Waxaa noo yimid nin kabtan ah oo ah taliye kuxigeenkii jeelka anagoo ah afat ilaa shan aan ka xasuusto Cabdi Ismaaciil, Maxamed Baashe iyo Yuusuf Maxamed ciise.
Maxaa dhacay ee aad xam-xamta lahaysaan ? ayay ahayd wixii uu markii u horraysayba na weydiiyey, waxaanan u sheegnay inaanay ahayn waxan ay la yimaadeen wax ka soconaya, anagoo waliba u raacinay inaanu raashinka dawladda ku leenahay ee maalintaa aanu xaq u leenayah in dadkayaga nala tuso.
Waxba ma ogidin iyo wax maxaya ayaanu haddana is weydaarsannay. Waar nimankii SNM ayaa saaka magaaladii Burco soo galay oo saraakiil baddanna ku laayey badankeediina haysta ee hayswaalina iyo aniga oo ugu jawaabay " bal waxaad noogu sheekaynayso eeg SNM tu ma sidii likihiibay Burco saaka uun ka soo dhex baxday ) iyo waar raashinkiina iska qaata oo uu sarkaalkii isagoo sii socda nagu soo tuuray ka dib ayaa waxaa nagu soo xoomay maxaaabiis kale inyar ka dibna waxaa yeedhay siidi ah hala xeroodo iyo askartii oo maxaabiista dhangax xagga danbe sidii adhiga kaga soo wadda.
Waxaa ii yeedhay anigoo sii galaya makhsin aan ahayn kaan u hoyanayey oo aan is lahaa inta labada xero u dhxaysa waa sidii caadada noo ahaan jirtaye turub ku soo ciyaar Xasan Cabdi oo ahaa askarigii maalintaa gaadhka haystay. Xasan Cabdi wuxuu ahaa nin dhalin yaro ah waxaanu markii hore maalin haysan jiray gaadhka qaybta dilka ee loo yaqaanno ( Qabta ) wakhtigaasi oo aanu halkaa ku jirnay.
Wuxuu ahaa nin aad u fur - furan maalintiisuna waxay run ahaantii ahayd maalin noo tirsan, isagoo maalintiisa xerada nooga soo qaadi jitay ciyaaraha dubnadda iyo turubka oon dadka dilka ah loo ogolayn, waxaa kale oo uu noo samayn jiray in uu qolalka naga furo marka aanu u baahano musqusha laba amma sadex jeer maalintii halka maalinta kale mar qudhaata nalooga ogolyahay inaanu musqusha gallo, ugu danbayntiina markii aanu u wareegnay jeelka weyn wuxuu ahaa ninkii noo soo galiyey Radio aanu markaa haysanay oo jeelka mabnuuc ka ahaa.
Turub ayaan qolkan ku soo ciyaarayaa iyo Alphow qolkaagii gal in layska furiba Allaa oge ayaanu aniga iyo Xasan Cabdi iswaydaarsannay. Maxaa dhacay ( inigoo afka u soo dhuubaya ) iyo SNM tii ayaa Burco saaka soo gashay oo qabsatay oo dagaal ilaa diyaarddo laysku adeegasaday ayaa ka socda ayaanu haddana su' aal iyo jawaab isagu celinay anigoo garan la' in SNM tu iyana diyaaraddo ku dagaalamayso iyo in kale, waxaanse xaqiiqsaday in warka labada nin ee faqashta ahaa isku raaceeni uu yahay wax jira, taasi oo ahayd waxaan hore looga baran askari ku yidhaa SNM baa meel soo gashay.
Maalintaasi waxay ahayd maalintii debed iyo albaab layska furo noogu danbaysay, Xasan Cabdi oo mardanbe qolkii aan ku jiray iigu yimidna waxuu ii sheegay in baskii raashinka noo siday la celiyey isagoon wax raashin ah laga soo dajin, waxaanu ii raaciyey inaanu ku farro adaygno waxaanu imika haysanno. Kow iyo sodonkii bishana waxaan furay warqad uu buuri ku jiray oo uu yuusuf Max'd Ciise oo qolkale ku jiraa iigu soo dhiibay askari, warqaddaasi buurigu ku jiro oo uu hoosteeda iigu soo qoray inay BBC-du waraysaray Axmed Siilaanyo iyo in Hargaysaba la soo galay.
Siciid Sara kac oo ahaa askarta jeelka ahaana askari u dhashay deegaanka madheera ahaana nin iska da' weryn oon dhibaato badnay ayaa soo hoos maray daaqadda aan hoos jiifsado oon markaa taagnaa, iyadoo maalintaasi dagaal xumi uu ka socday meel aan jeelka aad uga sii dheerayn, gariirka iyo xabaddubana ay ahaayeen kowo aad noogu soo dhaw. Siciid maxaad sheegtay iyo waa nabad ka dib ayaan Siciid weydiiyey meesha gariirkaasi ka dhacayo intii aanu Siciid ii sheeginna wuxuu i weydiiyey bal inaan wax raashin ah haysanno iyo in kale. Wax yar baanu haysanaa iyo kiiloo bariis ah ayaan ku siin doonaa haddii aad ii sheegto meesha dagaalkaasi ka dhacayo iyo waa Cadaadlay oo waliba ay nimankii qabsadeen ayaanu subaxaana aniga iyo siciid Sarakac isweydaarsannay anigoo siiyay labadii kiiloo ee bariiska ahaa ee raashin noogu danbeeyey mid ka mid ah.
Waxay ahayd shantii iyo afar iyo toban daqiiqo markii xabaddu ay ka dul qaraxday todoba boqol iyo konton maxbuus oo ku jiray jeelka Madheera, waxaan ku jiray qol ay ku jiraan beelaha dawladda taageersan halka anagu aanu ka ahayn lix nin intayada ka soo jeeda beelaha taageersan ururka SNM. Waxaanu isku qol ahayn nin la odhan jiray Max'd dhegaweyne oo ay Max'dCali ( labadoodaba Alla ha u naxariistee ) ay saaxiib ahaayeen, ninkaasi oo Max'dCalina u wadi jiray gaadhi dhafoor qiiqle ah markuu Max'dCali watay jabhaddii afraad ee dagaalkii soomaali galbeed, waxaana Alla ha u naxariistee Dhagaweyne iyo nin isna jeelka nagula jiray oo Hawiye ahaa lana odhan jiray Xaashi la soo xidhay markuu Alla ha un naxariistee Max'dCali goostay.
Markii ay cabaar xabddu dhacaysay ayaanu shantayadii nin ee kale ee Isaaqa ahaa isugu nimid booskii Dhagaweyne, anagoo Max'd weydiinayna bal inuu nooga warramo waxa uu u malaynaayo dagaalka dhacaya. Alla ha u natariistee isagoo markaa gacanta ku hayey kitaab quraana oo uu akhriyayey ayuu Max'd intuu dhoolo cadeeyey nagu yidhi " waar illayn qolbaan idinkula jiraa waxba ma arkayee orodoo ninwalawba booskaagii ku noqo oo in Ilaahay nimankaa guusha siiyo quraanka akhtista.
Ninbaa laga hayaa ku kaadshaan nin u aqaanaaye, xaggee buu jiraa quraan akhrisku rasaastaa intay hadh beeshay ayay maxaabiistii noqotay wax beerka dhulka ku haya iyo wax shuban musqusha ugu jira mana jirin cid- cid la hadlaysa iyo wax isweydiintoona. Sheekh Daa'uud oo ahaa nin da'diisu kontonka kor u dhaaftay ahaana nin gacan ku dhiigle ah kuna xukunnaa xabsi daa' in ahaana sheekha jeelkaba tukiya oo aanu isku gogol xignay labadayada maxadna soo kala horjeedaan ayaa kor ula soo toosay tusbax uu ku wardisanayey isagoo markan faal ula kala baxay. Hadii uu riday kuna celiyey oo uu yidhi markhaatigaa anna aan isleeyahay sheekh Daa'uud baa wax la tusayaa ayaan ka soo hinqaday gogoshii aan dhabarka ugu jiifay waxaanan hadal aan hoos u dhigayo ku idhi " sheekh Daa'uud bal bahalka iiga warran" .
Cabdow iska jiifso iyo anigoo isla markiiba dub ugu noqday jiifkaydii ayaa is xigay, waxaanay xabaddu dushayada si aan kala go' lahayn uga dhacaysay ilaa kow iyo tobanadii. Wakhtigaasi ayaa waxaad arkaysay xabadda oo aad moodo inay naga sii fogaanayso siina joogsanayso anigoo dhagahaygana ay ku soo dhacayeen dhawaqa siidhi aan is idhi malaha siidhigaasi waa jabhaddii oo sii baxaysa, iyodoo markaa haddii lay saro aan bar dhiig ahi iga timaadeen . Haddii ay xabaddii istaagtay ayaa mar labaad intayadii Isaaqa ahayn waxaanu haddana isugu nimi gogoshii Alla ha u naxariistee Dhagaweyne kitaabka ku akhrisanaayey, waxaanan ku idhi " Maxa'daw maxaad u malaynaysaa siidhigaasi malaha kii dawladda maahee waa nimankii oo la jabiyay. Intuu haddana qoslay aynuu nagu yidhi " maxaa aniga i weydiinaysaan hadii laynaga jabiyo meeshana waynu arki haddii kalena awalba weynu ku jirnaye" waxaanu hore ka sii watay quraan akhriskiisii.
Waxaan ku noqday booskaygii, waxaana iigu yimid Fircoon jaamacoo oo aanu isku qol ahayn horena aanu isku iskuul u ahayn, isagoo sita arbaca turub. waxaa nagu soo biiray laba nin oo kale waxaanuna la kala baxnay arbaca turubkii. haddii ninkii u horreeyey degay ayaa waxa dib u bilaabmatay xabaddii waxaanad arkaysay afartayadii nin oo nin waliba yeeke yeeke ku daray, ninwalibana intuu turubkii dhulka dhigay ayuu gogoshiisii dib ugu noqday anna waxaan dib ugu jiifsaday gogoshaydii. waxaa mar labaad faalkii la soo sare fadhiistay sheekh Daa'uud oo intuu dhigay haddana yidhi markhaatigaa, anna intaan markan hadal soo diyaarsaday ayaa markii uu dhameeyey sheekhu faalkii aan ku idhi sheekh dee bahalka nooga warran. " cabdow nimanku waxaan dhib ahayn inoolamay iman oo waxba inaga jabinmaayaan " iyo ma dhibtan aynu ku jirno mid ka daranbaa inoo hadhay oo aan sheekha si cadho ku jirta uga hor geeyey ayaa waxaan raaciyey istaag aan sare isu taagay anigoo daaqaddii aan hoos jiifay is kor taagay.
Waar Cabdirisaq iska warran iyo waa nabaddii aanu is dhaafsanay Daahir Max'd Jaamac oo guriga iga soo hor jeeda ku jira daaqaddana soo taagan, ayaa waxaa dhexdayada soo maray nin ka mid ahaa askarta jeelka lana odhan jiray Cabdillaahi Biric oo markaa wajiguusu aanu qurux badnayn.
Eeyaa Cbdillaahi inyar oo bariisa ma ku siiyaa malaha ilaa saaka waxba maad cunine iyo waar bariiskaabe dhacye daaqadaha ka fadhiista xabaddii xagaasay ka soo dhacaysaa yaanay daaqadaha idinkaga dhicine, haddii Daahir iyo Cabdillaahi is waydaarsadeen ayuu Cabdilllahi meen noo muuqata fadhiistay isagoo qorigiisii intuu labada lugood dhexdiisa galiyey madaxana afkiisa hore saaray, waxaanad jawigiisii hore iyo fadhigiisiiba ka arkaysay niyad jab weyn. Markan waxaa lagu dagaalamayaa meen naga yar durugsan iyadoo mararka qaar haddana xabadu dushayada ka dhacayso, waxaanad moodaysay in dagaalku laba aag ka kala socdo. Daahir Max'd Jaamac oo aanu wali sheekaysanayno aqalka uu ku jiraana iga soo horjeedo isagu arkayana waxa ka dhacaya banaanka weyn ee jeelka iyo gidaarka danbe ee jeelka ayaa mar qudha kor ugu dhawaaqay " Wallaahi waa kuwa gidaarkii danbe jabiyey " isagoo inyar ka dibna ku xigsiiyey waar waa kuwaa ayjeeshiina badhna meeshii dalooshay ka baxay badhna maadka ( maadku waa qayb jeelka ka mid ah laakiin aan cidi galin oo ay ka dhisan yihiin guryo aad u gaboobay ) galaye meesha inaga jabiya.
Haddii aqal walba aad ka maqlayasay garaaca albaabada laakiin aanu jirin aqal kaliya oo albaabka iska jabiyey, albaabada jeelkuna ay ahaayeey kuwo xadiid ah, ayaanu aniga iyo Daahir iskaga soo noqonay daaqaddii aaanu ka wada hadlaynay iyo bal inuu Daahir gidaarkii la dumiyey dhaq-dhaqaaqiisa la socdo.
Intaa ka dib waxaad maqlaysay baasuukayaal faro ku tiris ah oo xaggayaga u soo dhacayey halka dagaalka qaybtiisii badnay naga sii fogaanayso.
Waxaa mar qudhaata nagu kulmay iyadoo markaa saacaddu ahayd labadii duhurnimo oo gaw ah, raxan ka mid ah mujaahidiintii SNM oo jeelka ka soo galay xaggii danbe ee ay jabiyeen iyo koox kale oo ka soo galay albaabka hore iyo qaybta dilka oo uu Illaahay naxariistii janno isaga iyo intii dagaalkii xaqa ahaa ku shahiidayba ha siiyee uu ka mid ahaa MaxamedCali oo ahaa sarkaalkii watay hawl galkaa jabintii jeelka madheera, waxaanan ku soo baxay ninkii sarkaalka ahaa ee Hargaysa nalooga soo badalay oo bahal curiya oo illaa maalintii Burco la soo galay, anagana albaabada nalagu xidhay waayey hilibkii uu maxaabiista la cuni jiray oo saruuradaysan oo margiga oo xabadi kaga dhacday ka hiigaaya.
Wuxuu ahaa dagaal aad u culus iyadoo ciidamada faqashta ee goobtaa jeelka ka dagaalamay tiradooda lagu qiyaasay in ka badan sideed boqol oo askari kana mid ahaayeey ciidamadii laga qabsaday Cadaadlay, kuwii xerada madheera iyo kuwii qaybta kaydka hubka ee Barta iyo waliba ciidamo ka mid ah daraawiishta Hargaysa oo ahaa kuwii soo qaaday kontomeeye odayaal ah oo laga soo xidhay magaalada Hargaysa. Waxaad arkaysay maydka askarta faqashta oo raxan-raxan madaxa iskula jira halka jabkii firxadkoodu ay ka soo jeesteen dhankaa iyo dhinaca magaalada Berbera.